Sina ny fomba fampiasana mpanamboatra sy mpamatsy lancet | ORIENT
Metera glucose amin'ny rà
Ahoana ny fampiasana lancets Press Blood?
Ankehitriny dia mihamaro ny olona mandinika bebe kokoa ny fahasalaman'izy ireo ary mankany amin'ny Ivon-toeram-pitsaboana hanome ny fahasalaman'izy ireo amin'ny scan tanteraka. Noho io antony io dia mila in-3 ny lancet ra noho ny teo aloha. Ny fomba fampiasana ny lancet amin'ny rà dia nanjary zava-dehibe. Ny fomba fampiasana ny lacet amin'ny ra-saftly dia nanjary zava-dehibe kokoa.
Andao hianarantsika izao ny fomba fampiasana karazana lancet amin'ny gazety.
Fomba fampiasana ny Press Blood Lancet
Dingana 1 Esory ny satroka miaro ary ario ary tazomy amin'ny toerana tsara ilay satroka.
Dingana 2 Apetaho tsara ny lancet amin'ny tranokala mba hihetsika. Aza esorina ilay fitaovana raha tsy re ny tsindry azo henoina.
Dingana 3 Atsipazo ao anaty kaontenera maranitra sahaza miaraka amin'ny satrony amin'ny lancet ny lancet efa niasa.
Tsindrio lancet 2
Dingana 1 Asiana kofehy mandra-pisasarany mora foana amin'ny vatana lancet. Aza misintona.
Raha misintona azy ianao dia esorina ny fanjaitra ary lasa lancet efa niasa ny lancet;
Dingana 2 Dingana 2 Apetaho tsara ny lancet amin'ny tranokala mba hihetsika. Aza esorina ilay fitaovana raha tsy re ny tsindry azo henoina.
Dingana 3 Atsipazo ao anaty kaontenera maranitra mety ny lancet efa niasa. Ny lancet ampiasaina dia mety misy rà be eo amboniny.
Fampahalalana momba ny lancet ra ORIENTMED
ORIENTMED dia afaka mamatsy lancet ra isan-karazany. Lancet miolakolaka, lancet press, karazana lancet milamina isan-karazany, ary lancet Heel. Ny lancets amin'ny rà dia efa nahazo ny mari-pahaizana CE ISO sy FDA.
Miorina amin'ny kalitao tena tsara sy ny vidiny mirary dia nahazo laza tsara izahay tany amin'ny faritra maro samihafa, toa an'i Alemana, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, Etazonia, Amerika atsimo sns. Indrindra any Shily sy Moyen Orient, manana mpanjifa marobe izahay.
Fotoana fandefasana: Sep-29-2020
10L mpiorina oksizenina mikoriana avo tokana ...
Mpanentana oksizenina 10L tokana ao anaty tahiry ankehitriny, andro vitsivitsy, nanjary matotra kokoa ny tsy fisian'ny concentrator oxygen 10L. Amin'ny fampiasana ny fahombiazan'ny adsorption ny sivana molekiola, amin'ny alàlan'ny fitsipika ara-batana, miaraka amin'ny compressor tsy misy solika lehibe ho herinaratra, ny azota amin'ny rivotra sy ny fisarahana oksizena, ary farany ahazoana oksizenina avo lenta. Ity karazana mpamokatra ôksizena ity dia mamokatra oksizena haingana, avo ny fifantohan'ny oxygen, mety amin'ny karazan'olona rehetra ny oxygen ...
Ireo mpiorina oksizenina 10L dia manana tahiry ankehitriny.
Ireo mpiorina oksizenina 10L dia manana tahiry ankehitriny. Androany dia faritra maro no tsy misy mpanentana oksizenina ary maro ny baiko mihodina any amin'ny orinasa sinoa. Arakaraka ny isan'ny mpanjifa miha-maro any Shina, ny fotoana fandefasana mpamokatra ôksizena sinoa dia mihalava hatrany. Ankehitriny ny fotoana fandefasana mpamokatra oksizenina dia 15-45 andro. Ny orinasanay dia nahatratra fiakaran'ny vokatra tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ny tsipika famokarana. Ankehitriny misy eo amin'ny 270 fanampiny ny tahiry isam-bolana. Azafady mba jereo ity informati manaraka ity ...
Sakafo 60mm Petri, Tsy misy fonon-tanana azo ampiasaina amin'ny vovoka Nitrile, Saron'ny fitsaboana kiraro, Dispenser Cover Shoe Auto, Saron-tava Kn95 azo ariana, Kitapo fitsapana vohoka,